Tongotra sofa vita amin'ny metaly, tongotra latabatra metaly, biraon'ny latabatra - GeLan
Tongotra sofa vita amin'ny metaly
Tongotra latabatra azo ovaina
Ny hardware GeLan dia manome tongony fanaka vy an-jatony. Sahabo ho 60% no tongotra am-pandriana, 30% no ranjon'ny latabatra, ary 10% no zana-kazo. Safidy tongotra / latabatra isan-karazany isan-karazany no azonao atao, toy ny hairpin, triangle ary tapered. Azonao atao ihany koa ny misafidy latabatra, sofa ary kabinetra. Ary koa avy amin'ny vy, vy tsy misy fangarony, ary tongotra sofa .Metaly dia azo ampiasaina any an-trano, any amin'ny birao na amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Tongotra latabatra mainty maoderina vita amin'ny vy vita amin'ny vy ...
Tongotra volo V vy vy fisakafoanana kafe Din ...
Sofa Legs Fanaka faritra mainty manodidina kafe ca ...
tongotra fanaka vy
Ny tongotra amin'ny fanaka vy dia manome safidy tsara ho an'ny fanaka maoderina, na manome fahatsapana maoderina ho an'ny sofa sy seza nentim-paharazana. Ny endrika isan-karazany dia maneho endrika samy hafa, toy ny ranjo tapered, tongotra boribory, ary tongotra volo. Ireto tongony fanaka avo lenta ireto dia tena mety amin'ny fandriana, latabatra fisakafoana, arimoara, latabatra kafe ary fanaka hafa. Vita amin'ny vy na vy vy. Manaova habe isan-karazany mifanaraka amin'ny fanakao. Misy andiana habe azo isafidianana omena mba hahazoana antoka fa azo apetraka amin'ny fanaka rehetra ny tongotray fanaka.
tongotra latabatra vy
tongony sofa vy
Ny orinasanay dia mpanamboatra matihanina hamokatra vokatra fitaovana antonony sy avo lenta amin'ny teknika matihanina, trosa tsara mandritra ny 22 taona.
GeLan Industrial Co., Ltd. dia orinasa manana traikefa 20 taona amin'ny famokarana fitaovana fanaka. Any amin'ny faritra ara-indostrialy Xia'nan no misy azy, Tanànan'i Yuanzhou, Boluo County, Tanànan'i Huizhou. Manakaiky ny tanàna lehibe telo – Huizhou, Dongguan ary ny faritanin'i Shenzhen. Tena mety ny fitaterana. Amin'izao fotoana izao dia manana tranokely 6000 metatra toradroa izahay. Ny vokatra lehibe dia tongony sofa(tongony fandriana) ary tongotra latabatra, latabatra, tongony kabinetra, tongotra fandriana, ampifandraisina, lohana sofa ary fitaovana fanaka hafa, ary tongasoa anao handanjalanja ireo karazan-vokatra entin'ny hardware. Ny tambajotram-barotra dia mandrakotra an'i Eoropa, Etazonia, Japon ary ireo orinasa malaza eto an-toerana.
Mitady tongony fanaka vy ara-toekarena, miorina ary matanjaka? Zahao ny tongotra fanaka vy tsara indrindra ao amin'ny GELAN. Manana karazana tongotra samy hafa izahay, toy ny tongotra amin'ny fanaka, tongotra ambony latabatra, latabatra kafe na latabatra! GELAN dia mpamatsy tongotra amin'ny fanaka, ny fividianana tongotra amin'ny fanaka dia manana tombony amin'ny vidiny ary manome toky ny kalitaony. Izy io koa dia azo namboarina arakaraka ny zavatra takinao.GELAN dia manana karazana legioma fanaka metaly azo isafidianana, ao anatin'izany ny ranjo hairpin, tongotra miforitra ary tongotra azo ovaina. Azonao atao ny misafidy fomba sy karazan-tsoratry ny latabatra kafe, ranjon'ny latabatra ary tongony latabatra ambony latabatra mba hanamboarana mora foana ny fanaka sy hijerena tsara izay tadiavinao. Ny tongotry ny latabatra metaly (seza) dia matanjaka sy maharitra, manome fanohanana be dia be ho an'ny volanao. Tongotra latabatra metaly mijery tsara eo ambanin'ny latabatra kafe, latabatra ary birao fiasana.
Hanatsarana hatrany ny fomba fitantanana ...
Mpamatsy ambony China Stainess Steel Adjustable F ...
Mitazona ny fanatsarana sy ny fanatanterahana ny varotra ...
Rindrina metaly ho an'ny latabatra kafe misy latabatra marbra ...
Ny latabatra vita amin'ny metaly latabatra boribory vita amin'ny marbra ...
Latabatra Frame maoderina Round Metal Frame Side Tea C ...
Factory Custom-nanao lamaody metaly sofa ...
Tongotra latabatra vy asa vy tsy miangatra Rectangul ...
Mpamatsy sinoa Custom Stainless Steel Asa R ...
Latabatra latabatra vy fanaka an-trano manodidina kafe t ...
fanaka an-trano manodidina latabatra kafe marbra ambony go ...
Latabatra maoderina latabatra lehibe ankehitriny V-miendrika furnitu ...
Latabatra fanaka maoderina lehibe miendrika V miendrika fanaka ...
Tongotra fanaka vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy maoderina ...
Tongotra sofa vita amin'ny metaly, tongony latabatra, ranjon'ny fanaka.
Fa maninona no tongotra manify amin'ny tongotra fanaka ...
Inona avy ireo fitandremana fametrahana ny M ...
Fantatrao ve ny fomba fampifandraisana ny kafe ta ...
Inona no mahasamihafa ny avo a ...
Fomba fanamboarana ny ranjo latabatra misy kafe | G ...
Antsoy izahay izao: +86 13480550448